မနက်စောစောထနိုင်တဲ့အကျင့်ဖြစ်အောင် ပုံမှန်လုပ်ပေးရမယ့်အရာများ – MyStyle Myanmar
မနက်အိပ်ယာထနောက်ကျရင် ကျောင်းနောက်ကျ၊ အလုပ်နောက်ကျနဲ့ အဆင်မပြေတာတွေဟာ မနက်ခင်းမှာကတည်းက စဖြစ်တော့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် မနက်စောစောထနိုင်တဲ့ အကျင့်ဖြစ်အောင် ဘာတွေကို ပုံမှန်လုပ်ပေးရမလဲ?
နှစ်ခြိုက်စွာနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အိပ်စက်နိုင်ဖို့ဆိုရင် အိပ်ယာကို သန့်ရှင်းအောင်ထားဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ အိပ်ယာမသန့်ရင် ယားတာမျိုး၊ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်လို့ အိပ်ပျော်ဖို့ခက်ပါတယ်။ ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်မှတော့ မနက်လည်း စောစောမထနိုင်တော့ဘူးပေါ့။
ညဘက်ကိုစောစောအိပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ စောစောအိပ်ရင် အိပ်ရေးဝပြီး မနက်ဆို စောစောနိုးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၀ နာရီ ကိုနောက်ဆုံးထားပြီး အိပ်ပေးရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
၁၀ နာရီမှာအိပ်မယ်ဆိုရင် ၈ နာရီလောက်ထဲက ဖုန်းမသုံးပါနဲ့၊ ဂိမ်းဆော့တာ၊ ကွန်ပြူတာကြည့်တာမျိုးလည်း မလုပ်ပါနဲ့။ မအိပ်ခင် ၂ နာရီအလိုထဲက မျက်စိကို အနားပေးထားပါ။ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပြူတာကြည့်ရင် မျက်စိကြောင်ပြီး တော်ရုံနဲ့ အိပ်မပျော်တော့ပါဘူး။
အိပ်ခါနီးမှာ ရေအများကြီးမသောက်ပါနဲ့။ ရေခဏခဏသောက်ရင် တစ်ရေးနိုး အပေါ့သွားချင်လို့ ထရတာနဲ့ ကောင်းကောင်းမအိပ်ရလို့ မနက်စောစောမထနိုင်တော့တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကိုယ်က အခုမှ စောစောထတတ်တဲ့အကျင့်ကိုလုပ်မှာဆိုရင်တော့ အပေါ်ကအချက်တွေလုပ်ပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်မချသေးရင် နှိုးစက်ပေးထားပါ။ နှိုးစက်ပေးရင်လည်း အိပ်ယာဘေးမှာ မထားပါနဲ့။ အိပ်ယာနဲ့ဝေးနဲ့ ခုံပေါ်တင်ထားတာမျိုးလုပ်ပေးပါ။ ဒါမှ နှိုးစက်ထပိတ်ရင်းနဲ့ အိပ်ယာထနိုင်မှာပါ။ အနီးနားမှာထားရင် နှိုးစက်ပိတ်ပြီး ပြန်အိပ်မိပါလိမ့်မယ်။
မနကျအိပျယာထနောကျကရြငျ ကြောငျးနောကျကြ၊ အလုပျနောကျကနြဲ့ အဆငျမပွတောတှဟော မနကျခငျးမှာကတညျးက စဖွဈတော့တာပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ မနကျစောစောထနိုငျတဲ့ အကငျြ့ဖွဈအောငျ ဘာတှကေို ပုံမှနျလုပျပေးရမလဲ?
နှဈခွိုကျစှာနဲ့ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ အိပျစကျနိုငျဖို့ဆိုရငျ အိပျယာကို သနျ့ရှငျးအောငျထားဖို့က အရေးကွီးပါတယျ။ အိပျယာမသနျ့ရငျ ယားတာမြိုး၊ စိတျအနှောကျအယှကျဖွဈတာမြိုးတှေ ဖွဈတတျလို့ အိပျပြျောဖို့ခကျပါတယျ။ ကောငျးကောငျးအိပျမပြျောမှတော့ မနကျလညျး စောစောမထနိုငျတော့ဘူးပေါ့။
ညဘကျကိုစောစောအိပျတတျတဲ့ အကငျြ့ဖွဈအောငျလုပျပါ။ စောစောအိပျရငျ အိပျရေးဝပွီး မနကျဆို စောစောနိုးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ၁၀ နာရီ ကိုနောကျဆုံးထားပွီး အိပျပေးရငျ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
၁၀ နာရီမှာအိပျမယျဆိုရငျ ၈ နာရီလောကျထဲက ဖုနျးမသုံးပါနဲ့၊ ဂိမျးဆော့တာ၊ ကှနျပွူတာကွညျ့တာမြိုးလညျး မလုပျပါနဲ့။ မအိပျခငျ ၂ နာရီအလိုထဲက မကျြစိကို အနားပေးထားပါ။ ဖုနျးနဲ့ ကှနျပွူတာကွညျ့ရငျ မကျြစိကွောငျပွီး တျောရုံနဲ့ အိပျမပြျောတော့ပါဘူး။
အိပျခါနီးမှာ ရအေမြားကွီးမသောကျပါနဲ့။ ရခေဏခဏသောကျရငျ တဈရေးနိုး အပေါ့သှားခငျြလို့ ထရတာနဲ့ ကောငျးကောငျးမအိပျရလို့ မနကျစောစောမထနိုငျတော့တာမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ။
ကိုယျက အခုမှ စောစောထတတျတဲ့အကငျြ့ကိုလုပျမှာဆိုရငျတော့ အပျေါကအခကျြတှလေုပျပွီးတာနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို စိတျမခသြေးရငျ နှိုးစကျပေးထားပါ။ နှိုးစကျပေးရငျလညျး အိပျယာဘေးမှာ မထားပါနဲ့။ အိပျယာနဲ့ဝေးနဲ့ ခုံပျေါတငျထားတာမြိုးလုပျပေးပါ။ ဒါမှ နှိုးစကျထပိတျရငျးနဲ့ အိပျယာထနိုငျမှာပါ။ အနီးနားမှာထားရငျ နှိုးစကျပိတျပွီး ပွနျအိပျမိပါလိမျ့မယျ။
MyStyle Myanmar2019-12-09T21:50:56+06:30December 5th, 2019|အထှထှေေ ဗဟုသုတ – General Knowledge|